Simbi Yaiba, Wire Mesh Fence Mugadziri - Tian Yilong
Wire Mesh Mudziyo
Stillage uye Metal Container
Pet Kutamba Peni
Yakawedzerwa Metal Mesh
Simbi Fence Post
Iron Wire Zvipikiri
Yehuku Netting Hot vakanyika kwakakurudzira kuti Chicken Runs
Yakadzama Chigadzirwa Tsananguro Chinyorwa: Yakapisa-yakadzvanywa kwakakurudzira Waya Chikumbiro: Pens & Enclosures Rudzi: Kwakakurudzira Usati Weaving (GBW) Hole Saizi / Wire Dia: 1 ”/ 0.835mm Feature: Mari, Pakati Pakati Hupenyu Hwevatengi Yakagadzirwa: Yakagamuchirwa Yakakwirira Mwenje: inorema basa huku waya, nhema nhema ...
Peni Uye Enclousers Chicken Coops Chicken Wire Netting
Yakadzama Chigadzirwa Tsananguro Chinyorwa: Yakapisa-yakadzvanywa kwakakurudzira Waya Chikumbiro: Peni Uye Enclousers Aperture: 1, Wire Dia: 18gauge Width: 2ft, 3ft, 4ft Kureba: 100ft Kudzika: 19cm Yakakwirira Mwenje: nhema yakasungirwa tambo tambo, nhema yakasungirwa inosunga waya Chicken Coops Chicken Wire Net ...
Hexagonal Simbi Stucco Waya Netting Kuzvidzora-Furred
Yakadzama Chigadzirwa Tsananguro Chinyorwa: Hot Dhi yakakwenya waya, Isina Simbi Waya saizi: 1inch, 25mm Feature: Pakati Pakati Hupenyu Tarisiro, Hukuru Reinforcing Fekitori Yakagadzirwa: Hongu Mutengi Akagadzirwa: Yakagamuchirwa Chikumbiro :: Kupurasita, Masonry Uye Plastering Yakakwirira Mwenje: nhema nhema annealed tai waya, bl ...
Kunze kukuru imbwa simbi keji peturu kennel uye inomhanya pre vakaungana
Tsanangudzo Modular yakasungirirwa imbwa kennel ndeye nyore kuungana peturu kennel. Inogona kuve tsika yakagadzirwa. Iyo inowanzoitirwa imbwa hombe, mbudzi nehuku. Iyo inofema, inogadzikana, yakachengetwa, uye iwo mapaneru anouya pre-akaungana. Tsananguro Chigadzirwa Zita Pre-yakaunganidzwa Welded Imbwa Kennel Chigadzirwa Ruvara Blac ...
Kunze Kwakakura Chain Chekesa Pet Cage Kennel yePet Run Runotamba 10ft x 10ft x 6ft
Dudziro Modular Chain Batanidza Imbwa Kennel yakagadzirwa neMetal Pipe uye Chain Link Simbi. Iyo mhando inorema basa pet chipfuva. Yakakura kwazvo kumhuka hombe yekugara kwekunze, inofema, inogara uye yakachengetwa. Zvipfuwo zvezvipfuyo, vatakuri uye dzimba dzemhuka dzekunze kutamba. Tsanangudzo Chigadzirwa Zita Mo ...
Modular nhema hupfu yakakomberedzwa simbi chubhu chipfuwo keke mageji imbwa dzinokwira kennels
Tsanangudzo Modular yakasungirirwa imbwa kennel ndeye nyore kuungana peturu kennel. Inogona kuve tsika yakagadzirwa. Iyo inowanzoitirwa imbwa hombe, mbudzi nehuku. Iyo inofema, inogadzikana, yakachengetwa, uye iwo mapaneru anouya pre-akaungana. Muliple kumisikidzwa kwakaungana, Imbwa keji kumisikidzwa-mukati maminetsi asingasviki makumi matatu. Premium ...
Nyanzvi yePurasitiki Yakavharwa Bindu Wire Mesh Fenzi Nesimbi Simbi Sisitimu
Yakadzama Chigadzirwa Tsananguro Chinyorwa: Magetsi Kwakakurudzira Wire Ruvara: Muchena, Green Wadhi Dia: 4.5mm Hole Saizi: 200mm X 55mm Matekiniki: Professional Welding Chikumbiro: Isolate Fence YeGadheni, Yekugara Post Model: Square Post, Mushroom Shape, Quadrate Fence Post Feature: Nice App ...
Yakachena 14 15 16 Gauge Wire Mesh Fence, Green Plastiki Yakaputirwa waya Fenzi
Curvy Welded Electro kwakakurudzira Wire Mesh Fenzi Akanaka 4.0mm Dia
Yakadzama Chigadzirwa Tsananguro Chinyorwa: Electro kwakakurudzira Waya Ruvara: Chena, Girinhi, Yero waya Dia: 4.0mm Hole Saizi: 200mm X 65mm Technique: Professional Welding Chikumbiro: Isolate Fence YeGadheni, Road Post Model: Square Post, Quadrate Fence Post Feature: Nice Chitarisiko, Simba ...
Strong hwokugadzira chikwata
Isu tine yakasimba timu yehunyanzvi muindasitiri, makumi emakore ehunyanzvi ruzivo, yakanakisa dhizaini dhizaini, ichigadzira yepamusoro-yepamusoro-inoshanda michina.
Iyo kambani inoshandisa epamberi dhizaini masisitimu uye kushandiswa kwepamberi ISO9001 2000 yepasi rose mhando manejimendi manejimendi manejimendi manejimendi.
Iyo kambani inoshanda mukugadzira michina yemhando yepamusoro, yakasimba simba rehunyanzvi, kugona kwakasimba kugona, akanaka masevhisi masevhisi.
NEI UCHIFANIRA KUSHANDISA GALVANIZED PASHURE WELD WIRE FENCING MATERIALS?
Uri kutsvaga kwakakurudzira welded waya fenzi? Unoziva iwe une sarudzo? Kune mhando mbiri dzakakurudzira simbi dzakakomberedzwa nefenzi zvinhu: GBW (kwakakurudzira usati Weaving / Welding) uye GAW (kwakakurudzira Mushure Weaving / Welding). Zvinoonekwa zvinoita zvakafanana. Asi uchitarisisa, iwe ca ...
NZIRA DZITATU DZOKUGADZIRA CHIKUKU WIRE / HEXAGONAL WIRE INETTING zvakanyanya
1) Kuwedzera simbisa waya (imwe inosimbisa waya pa 0.5m) Kazhinji wedzera imwe yekusimbisa waya mu 1m upamhi netting. Wedzera maviri simbisa waya mu 1.5m hupamhi netting Wedzera matatu simbisa waya mu 2.0m upamhi netting ONA: Iyo nhamba yekusimbisa waya inogona kuwedzerwa pachikumbiro chevatengi. 2) yakapetwa kaviri Gadzira iyo e ...
Rolls inotumirwa kune babamunini vangu yemhando yechigayo kuti ive yakarongedzwa. Iyi chigayo inonyanya kuverengera vinyl yemhando dzese dzetambo mesh, kusanganisira mesh inoshandiswa kuvaka misungo yemak lobster. Pano yemhando yepamusoro, gobvu uye inoshanduka kupfeka yeUV inorapwa Nhema PVC yakasungwa kwazvo kune tambo mesh. Iko kupfeka kuri s ...
Isu, yekugadzira nekutengesa combo, mhuri ine bhizinesi mune inoenderera ichishanda kubvira 1990. Isu tinogadzira uye tinotengesa kunze kwenyika chigadzirwa chisanganiswa chetambo, waya netting uye fenzi uye zvimwe zvinhu zvinoenderana. Isu tiri yako yakavimbika sosi kune yako ese waya mesh zvinodiwa.Tinozvipira kupa mhando mhando zvigadzirwa zvinomiririra yakanakisa kukosha uye emuenzaniso mazinga evatengi masevhisi pamatanho ese mune redu bhizinesi. Yedu mamiriro emidziyo yehunyanzvi, ruzivo rwakakura, zveshuwa zvemhando zvekudzora uye timu yakazvipira inovimbisa yakakwana waya mesh mhinduro dzekushandisa kwepasirese.
Takazvipira kupa mhando.
Isu tiri sosi yako yaunovimba.
Maenzaniso emhando yebasa revatengi.
Liusu Indasitiri Zone, Ding Zhou Guta, Hebei Province, PRC.